Maninona no tsy naharakotra an’ireo kaominina manerana ny Nosy ny vovonana IRD ? Misy fari-pifidianana, ireo antoko ao anaty vondrona IRD no manana kandidà toa an’ny Malagasy Miara Miainga(MMM). Ny lalàna aloha dia mazava tsara fa ny antoko ao anatina vovonana iray dia tsy afaka mandrotsaka kandidà ao anatin’ny fari-pifidianana iray. Matoa misy kandidà MMM amina kaominina iray dia tsy misy IRD. Raha tsy mahafeno ireo kaominina miisa 1695 ny IRD dia mila mieritreritra izy aloha. Faharoa, raha mijery ny antontanisa ireo kandidà dia maro ireo mpirotsaka hofidiana amin`ny anaran`ny tsy miankina. Raha fehezina dia ny tsy fahafenoan`ny IRD ireo kaominina ireo sy fahamaroan`ireo kandidà tsy miankina dia milaza fa tsy maharesy lahatra ny IEM (Initiative Emergence Madagascar). Raha naharesy lahatra dia nirotsaka tamin`ny IRD ireo tsy miankina.